Farmaajo oo maanta qado sharafeed u sameeyay dhowr xildhibaan oo ka tirsan labada Aqal (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Farmaajo oo maanta qado sharafeed u sameeyay dhowr xildhibaan oo ka tirsan labada Aqal (SAWIRO)
Ra’iisul wasaarihii hore ee dowladdii KMG aheyd ee Soomaaliya haatanna ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa tan iyo markii uu dhawaan dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ka bilaabay ololihiisii doorasho.
Mr. Farmaajo ayaa maanta qado sharafeed u sameeyay in ka badan 30 xildhibaan oo dhawaan lagu soo doortay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose, wuxuuna soo bandhigay qorshihiisa musharaxnimo.
Sidoo kale, Mr. Farmaajo ayaa xildhibaanada labada Aqal weydiistay inay fursad siiyaan islamarkaana ay u codeeyaan doorashada, si uu dalka uga samata bixiyo dhibaatooyinka ragaadiyay 26-kii sano ee lasoo dhaafay.
Dadka kasoo qeyb-galay qado sharafeedkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Jubbaland C/laahi Fartaag iyo xildhibaanada labada Aqal ee lagu soo doortay magaalada Kismaayo.
Si kastaba ha ahaatee, Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa lagu tilmaamaa inuu taageero badan ku haysto shacabka Soomaaliyeed dhexdeeda, wuxuuna markii labaad u tartamayaa xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Mr. Farmaajo ayaa haatan rajadiisa ku xiran, inuu codad badan ka helo xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka, balse waxaa muuqata inay aad ugu yar tahay rajadiisa ku aadan inuu codadkaasi helo, maadaama ay xildhibaanadaasi badankood yihiin kuwa aad ugu dhaw madaxweynaha Soomaaliya ee haatan xilka kasii degaya Xasan Sheekh Maxamuud.